Ambanja: tafapetraka ny fitiliana ny vokatra kakao | NewsMada
Ambanja: tafapetraka ny fitiliana ny vokatra kakao
Tafapetraka ao Ambanja izao ny laboratoara fitiliana ny vokatra kakao mialoha ny hanondranana azy any ivelany, hanaraka ny fepetra apetraky ny tsena iraisam-pirenena. Tanteraka izany vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana malagasy sy ny Banky iraisam-pirenena. Ho fiarovana ny kalitao sy ny vidin’ny kakao avy eto amintsika ny nananganana izao toeram-pitiliana izao.
Antoky ny fiainan’ny maro ao Ambanja sy ny manodidina, ny any Diana sy ny firenena manontolo ny lalam-pihariana kakao. Koa hanampy betsaka ny mpamboly azy any an-toerana izany, sy hitazonana ny lazan’io vokatra io avy aty amintsika. Vonona ny tantsaha hanaraka ny toromarika rehetra, hanao ezaka hanatsara sy hampitombo ny vokatra, ary ny miandraikitra ny laboratoara hanohy ny fanaraha-maso ny vokatra. Nilaza ireo tantsaha fa voavaly ny hetahetan’izy ireo, manome toky ny hampiasa io toerana io. Tsy maintsy mandalo fitiliana izay aondrana rehetra.
45 ny firenena mpamokatra maneran-tany, saingy ny valo amin’ireo monja ny mamatsy ny 80 % ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny antontanisa farany (2017), maivana ny vokatra eto an-toerana, 6 000 t isaky ny taom-pamokarana, nefa efa mahatratra 4 tapitrisa t izao ny vokatra maneran-tany. Koa ezahina havaozina ny fototra kakao any Ambanja, efa maherin’ny 50 taona ny ankamaroany.